r. ဆိုးကျိုးများ၊ ဝမ်းပျက်၊ ခေါင်းမူး၊ ရင်ဘတ်ပူ၊ အိပ်မရ၊ ပျို့၊ ယား၊ အန်၊ ဗိုက်နာ၊ အနီရောင်အင်ပြင်ထွက်။ အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ-နှုပ်ခမ်း-လျှာ-လည်ပင်းရောင်၊ ကိုယ်ပူ၊ ချမ်းတုံ၊ မူးဝေ၊ ယားယံ၊ အိပ်မပျော်၊ စိတ်မကြည်၊ ဗိုက်အောင့်၊ သွေးယို၊ ဆီးနည်း၊ တက်ခြင်း၊ မွေးလမ်း အဖြူဆင်းခြင်း၊ မှက်ခရု၊
251.	Griseofulvin, Grisactin forte (ဖန်းဂပ်စ်)ခေါ် မှို၊ ပွေး ရောဂါဆေး၊ = capsule or tablet, 125 mg, 250 mg; 500 to 1000 mg daily; Children 10 mg/kg daily အရေပြားဖြစ်လျှင် ၁-၆ ပါတ်၊ လက်သည်း- ဆံပင်ဖြစ်လျှင် ၆ လကြာ ပေးရမည်။
261.	Hydrocortisone Sodium Succinate, Solu-Cortef (ကော်တီကို-စတီရွိုက်)ဆေး၊ (ရှော့ခ်) ဖြစ်လျှင် အရေးပေါ်ပေးရသည်။ ၁ဝဝ မီလီဂရမ်ကို သွေးပြန်ကြောထဲထိုးပေးရသည်၊
267.	Ibuprofen, Ibugesic (NSAIDs) ဆေးအုပ်စု။ 200-400-800 mg TDS/QID လစဉ်ရာသီလာစဉ် နာခြင်း၊ နာခြင်းအမျိုးမျိုး၊ သာမန်အကိုက်၊ အဖျား၊ ကလေး၊ ၆လ မှ ၁၂ နှစ်၊ ၅-၁ဝ မီလီဂရမ်/ကေဂျီ၊ အများဆုံး ၃.၂ ဂရမ်၊ ၁ဝ ရက်ထက်မကျော်စေရ၊ အစာနှင့်တွဲပေးပါ။ ဆိုးကျိုးများ၊ အနီရောင်အင်ပြင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ နားထဲကအသံထွက်၊ အိပ်ချင်၊ ဗိုက်နာ၊ ပျို့၊ ဝမ်းပျက်၊ အစာအိမ်နှင့် အူအနာ။
462.	Valium (Diazepam) = 2-10 mg BD IV/IM/Oral အတက်ကျဆေး၊ စိတ်ငြိမ်ဆေး၊ အရက်ဖြတ်ခြင်း၊ မွေးဖွားစဉ်နာခြင်း၊ ဝက်ရူးပြန်၊ မေးခိုင်၊ မခွဲစိတ်မီ စိတ်ငြိမ်စေရန်၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ (ကလိုရိုကွင်း) များသွားခြင်း၊ Orally 2-10 mg BD/TDS/QID; maximum 30 mg daily; ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = စိတ်မကြည်လင်း၊ မူးဝေ။ Cimetidine, Omeprazole တို့နှင့်တွဲမပေးရ။ အရက်ဖြတ်လျင် 10 mg,3or4times during the first 24 hours, reducing to5mg,3or4times daily as needed
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆေးဝါးဗေဒ&oldid=720000" မှ ရယူရန်